Novambra 19, 2017 Admin fampiharana, Computer, Driver, OSGEAR Support, Products, Storage 0
Blu-ray Disc (fanafohezana BD) dia iray amin'ireo taranaka manaraka ny kapila DVD format taorian'ny mba hitahiry avo-tsara Video sy avo-fahaiza-tahirin-kevitra. Blu-ray dia manaraka Disc-taranaka kapila famaritana Nikasa ny Blu-ray Disc Association, izay ahitana ireo Sony sy Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., ary SONY no nitarika ny feno fampiroboroboana ny vokatra mifandraika amin'ny 2006. Blu-ray Discs no atao hoe noho ny namaky teny sy nanoratra tamin'ny laser manga mampiasa andry amin'ny halavan'ny onjam- 405 nanometers (ny 650 nanometer halavan'ny onjam mpamaky mena ho an'ny DVDs sy ny 780 nanometer halavan'ny onjam infrared ho an'ny CD). Ity ny vondrona matihanina tsara Blu-ray playback mirehitra rindrambaiko ho an'ny rehetra mba hizara.
More Recommended rindrambaiko fitsidihana ambany ~~~
Fahazoan-dalana mankany for Mac OS
Hot Tolotra ~ ~ ~
Mba mampiasa rindrambaiko sy manohana tany am-boalohany
Leawo miasa maimaim-poana toy ny Blu-ray kapila mpilalao, maimaim-poana kapila DVD mpilalao, maimaim-poana HD 4K Video, maimaim-poana ISO rakitra mpilalao, ary maimaim-poana teny mpilalao. Maha-maimaim-poana Blu-ray kapila mpilalao rindrambaiko fampiharana, dia mitendry Blu-ray Discs ho tanteraka maimaim-poana, no ho midina mifanaraka amin'ny DVD Discs playback, na inona na inona izy ireo ara-barotra na tapaka. Izany no tsara indrindra rindrambaiko malalaka hilalao Blu-ray ao amin'ny Windows (anisan'izany ny Windows Vista, XP, 7, 7, 8, 8.1, ary 10).
PowerDVD feno sarimihetsika tsy manam-paharoa, mozika sy ny sary lafin-javatra ilaina noho ny famoronana unbeatably immersive fahitana & feo traikefa. Ary ho an'ny olona nijery ny mamorona sarimihetsika mihevitra ao an-tranony, PowerDVD izao tontolo izao-manana ny teknolojia voalohany ilaina mba hahabetsaka ny mety ny 4K sy ny HDR fahita lavitra!
Macgo Blu-Ray mpilalao
Standard Versiom - The best Blu-ray mpilalao software that supports BD, ISO antontan-taratasy sy ny BDMV lahatahiry amin'ny miavaka fitaovana haingana - BluFast MX.
Pro Version - Fanohanana manontolo nasongadina Blu-ray sakafo Hampitomboina peo tany am-boalohany toetra mifanaraka amin'ny haino aman-jery maro endrika
Ento Hollywood an-trano miaraka amin'ny lahatsary nitarika playback, Blu-ray sy ny DVD rindrambaiko, Corel® WinDVD® Pro. Avy vahaolana avo-4K lahatsary sy HEVC (H.265 *), ho 3D Video, DVDs sy ny Blu-ray, mankafy be isan-karazany amin'ny endrika manaitra kalitao, Dolby feo sy ny maro hafa. Intuitive fanaraha-maso amin'ny nohavaozina, maoderina interface tsara dia aoka ianao tsara-miray feo mora lahatsary sy ny feo. Plus, mankafy malama playback vaovao 240 fps fampisehoana.
AnyMP4 Blu-Ray mpilalao
Play misy Blu-ray Disc / Folder / ISO sary rakitra, 4K lahatsary sy ny HD 1080p Video avo famaritana sary sy ny lahatsary tsara kalitao.
Blu-ray Toolkit dia rehetra-in-iray Blu-ray rindrambaiko, izay ahitana Blu-ray Player, Blu-ray Ripper, sy ny Blu-ray Copy Platinum rindrambaiko. Miaraka mahery io sy zavatra maro Blu-ray Toolkit, mpampiasa dia afaka mora foana na hiatrehana olana Blu-ray sy mankafy ny Blu-ray miavaka traikefa.
Ny mpilalao mahery izay mahay mitendry Blu-ray kapila, Blu-ray fampirimana, Kapila DVD / fampirimana / ISO rakitra sy ny haino aman-jery mahazatra sy ny lahatsary antontan-taratasy hampandeha tsara. Ianao dia afaka ny hilalao na Blu-ray kapila HD 1080p mivantana amin'ny vokatry maso sy milalao H.265 / HEVC Encoding 4K lahatsary antontan-taratasy losslessly amin'ny PC. Inona koa, Aiseesoft ity Blu-ray Player miasa ihany koa ho toy ny haino aman-jery mpilalao na inona na inona HD / SD Video antontan-taratasy ary ianareo dia afaka hankafy ny vokatry immersive-peo.
Hahazo bebe kokoa Blu-Ray sy ny vokatra Support ~ kitiho eto
4K Ultra HD Blu-ray sy ny Discs Players – dia mila mahafantatra zavatra
Nahoana no tsy mamaky na milalao Blu-Ray kapila DVD?
Ahoana no milalao 3D Blu Ray BD Video??
OS-STORE teknolojia Nokia processors HTC Device Model mpitantana Fitaovana Public Tanjona HD Graphics mpamily fanohanana Finday fandikana ara-dalàna Intel Processor Samsung Series Driver Support Technology_Internet 64-kely Windows Unité centrale Software
Finday Technology_Internet mpitantana Fitaovana Intel Samsung Galaxy Intel Server Samsung Processor Public Tanjona fandikana ara-dalàna mpamily fanohanana Unité centrale Sony Ericsson Qualcomm Device Model Series Driver Support processors Nokia Software OS-STORE HTC teknolojia finday avo lenta 64-kely Windows HD Graphics